कहाँ छ महिला अधिकार ब्यबहारमा ? – साइन्स इन्फोटेक
अक्टोबर 10, 2019 अक्टोबर 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments अधिकार, महिला
दुईवटा महिलाले एकजना पुरूषसंग विवाह गर्दा कानुन लाग्छ भने कसरी महिला अधिकार भयो ? महिलालाई आज दिनप्रति दिन बलात्कार भएका सयकडौं होइन हजारौं घटना देखिएको छ । एउटा महिलाले अर्को महिलाको उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
एउटा महिलालाई पर्यो भने अर्को महिलाले महिलालाई नै दोष लगाउने परिपाटी हावी छ । विवाह गरेर घर गई सकेपछि श्रीमान खसेको छ भने उसको भाग्यलाई दोष लगाउने परम्परा सदियौदेखि विद्यमान छ । के यही हो महिला अधिकार ?
बोल्दैमा अधिकार हुने होइन लागु गर्न सक्नुपर्छ । समाजलाई परिवर्तन गर्न महिलाको मात्र केहि चल्दैन । खुसी साथ बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार महिलामा सुनिश्चित हुन सकेमा मात्र महिला अधिकारको कुरा लागु हुन सक्छ । गलत महिलाबाट होइन पुरूषबाट पनि भएको छ ।
महिलालाई सम्पत्ती होइन पुरूष सरह शिक्षा पाउनु पर्छ । सम्पत्तिको अधिकार पुरूष कै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसले परिवारमा शान्ति दिन सक्छ । यदि गलत श्रीमान छ भने घर मात्रै होइन माइतीले दिएको सम्पत्तिमा पनि समाप्त पार्न सक्छ शान्ति, अमन, चैनमा समेत खलल हुन सक्छ ।
कतिपय अवस्थामा झुठो आश्वासनमा महिला रमाएको देखिन्छ । अरूले मिठो गफ गरेको भरमा हदैसम्मको विश्वासमा महिला परेको देखिनु पनि बलात्कारको कारणमध्ये एक हुन सक्छ । अरूलाई दोषी दिने परम्परा हदैसम्म बढेको देखिनु महिलाको हकमा राम्रो होइन यस्तो क्रियाकलाप नै वलत्कारको कारणमध्ये एक भन्न सकिन्छ ।
महिलामाथि भएको जस्तोसुकै हिंसा किन नहोस् सवै मिलेर प्रतिकार नगर्दासम्म महिला हिंसा रोकिएला जस्तो लाग्दैन । आज महिलाद्वारा नै महिला पिडित भएको देखिन्छ । एउटा सासु पहिले कसैकी छोरी हुन्छन पछि मात्र बुहारी हुदै सासु हुन पुग्छिन तर म पनि कसैकी छोरी थिए भन्ने नभई वुहारीलाई दवाउने पर्यत्न भएको हुन्छ के यही हो महिला अधिकार?
म यस्ता अनेकौं घर हेर्दछु जहाँ सासु ससुराको कुरा सुनेर श्रीमानबाटै अपहेलित छन् । महिला दिदी बहिनिहरू सासु ससुराबाटै बुहारी पिडित भएको देखेको छु । महिला अधिकारको कुरा मात्र देखिन्छ तर लागु भएको छैन । हाम्रो देशमा शहरमा होस् वा गाउँमा यस्ता घटना हेर्न सकिन्छ । कानुन कहाँ छ जसले महिलाको हक हितमा काम गरेको छ । यहाँ महिला इच्छालाई दवाउने प्रयत्न मात्र भएको छ ।
मैदानमा भाषण गर्दा मैला हिँसाको कुरा धेरै भएको हुन्छ तर घर पुगेपछि श्रीमती कुट्ने, बुहारीलाई गाली गर्ने शंका गर्ने जस्ता क्रियाकलाप प्राय: दैनिकजसो भएको हुन्छ । के यही हो महिला हिँसा विरोधको अभियान, भाषणमा छ लागु छैन । जबसम्म हरेक घर-घरबाट अभियान शुरू हुदैन तबसम्म भाषणको कुनै अर्थ छैन ।
← चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार दुई अमेरिकी र एक बेलायती वैज्ञानिकलाई
सन् २०१९ भौतिकशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार तीनजना वैज्ञानिकहरुलाई →